राष्ट्रपति कार्यालय किन बोलेन ?
घटना र विचार, न्युज डेस्क !7months ago November 28, 2018
कुनै पनि देशका सेरिमोनियल राष्ट्रप्रमुखलाई त्यस देशका नागरिकले के–के भन्न मिल्ने हो के नमिल्ने, कतिसम्म गाली गर्न मिल्ने हो, कति नमिल्ने भन्नेबारेमा आचारसंहिता बनाइएको हुँदैन । साथै कस–कसले के–केसम्म भन्न सक्छन् भन्ने कुराको कल्पना पनि खासै गरिएको हुँदैन । सेरिमोनियल नै भए पनि कतिपय अवस्थामा राष्ट्रप्रमुख (राजा या राष्ट्रपति जो भए पनि) बोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना जनताको हुन सक्छ । प्रायः सरकारबाट आजित भएपछि लौ न केही बोल्नुपऱ्यो भन्ने गरिएको छ । पाँच वर्षअघि थाइल्यान्डमा हिंसा भड्किँदा त्यहाँका जनताले राजालाई मौनता साँधेर नबस्न अनुरोध गरेका थिए ।
हामी मङ्सिरको पहिलो हप्ताभरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गाली–गलौज गर्न ब्यस्त रह्यौँ । सामाजिक सञ्जालमा गरिएका गाली–गलौजको त कुनै हिसाबकिताब नै रहेन, तर मूल प्रवाहमा रहेका मिडियामै पनि यति गाली–गलौज प्रकाशित/प्रसारित भए कि मानौँ मिडियाले कुनै सामग्री दिँदा त्यसको पुष्टि गर्नुपर्दैन । समाचार राष्ट्रपतिलाई गाडी किन्नका लागि सरकारले १८ करोड बजेट निकासा गर्न लागेको भन्ने थियो । तर, कसैले पनि यस्तो किन गरेको ? कहिले गरेको ? कसले गरेको ? यो मौखिक मात्र निर्णय हो कि लिखित ? क्याबिनेटको निर्णय हो भने कहिलेको हो ? राष्ट्रपति आफैँले गाडी माग गरेको हो या सरकारले आफैँ दिने निर्णय गरेको ? निर्णय नै भइसकेको हो कि होइन ? १८ करोड एउटै गाडीका लागि हो कि हामीले सडकमा देख्ने गरेको सुरक्षावाला तामझाम सबैका लागि ? यी र यस्ता प्रश्नहरू गरेको देखिएन ।
राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन र निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरणबीच कुनै सम्बन्ध छैन । तर, यो प्रसङ्गलाई यसरी जोडियो कि मानौँ राष्ट्रपतिका लागि गाडी किन्न लागेकै कारणले निर्मलाको हत्या भएको थियो ।
भविष्यमा प्रयोग गरिने गाडीलाई लिएर राष्ट्रपतिको विगत र वर्तमानमाथि प्रहार मात्र गरिएन, मुलुकमा भइरहेका हिंसाका घटना पनि उहाँकै कारणले भएका हुन्झैँ गरी प्रस्तुत गरियो । राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन र निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरणबीच कुनै सम्बन्ध छैन । तर, यो प्रसङ्गलाई यसरी जोडियो कि मानौँ राष्ट्रपतिका लागि गाडी किन्न लागेकै कारणले निर्मलाको हत्या भएको थियो । कतिले त महिला राष्ट्रपति भएर निर्मलाको हत्यारा खोज्न छाडेर गाडी खोज्दै हिँड्नेसम्म लेखे । स्व. मदन भण्डारीले चढ्ने गर्नुभएको साइकललाई पनि खुब चर्चामा ल्याइयो । समग्रमा यसरी चर्चा गरियो मानौँ उहाँ आफैंले मलाई यो गाडी चाहिन्छ भनेर सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । र, लक्जरी गाडी नै उहाँको जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो शौख र सपना हो ।
हेलिप्याडको प्रसङ्ग पनि गाडीसँगै जोडिएर आयो । केही पूर्वप्रहरी अधिकारीका भनाइहरूसमेत राख्न जाँगर चलाएका मिडियाले उक्त निर्णय कहिले भएको थियो भन्ने कुराको सोधीखोजी गर्न सकेनन् । संयोग नै भनौँ गत असोज २९ गते केही महिला पत्रकार साथीहरूसहित यो पङ्क्तिकारले राष्ट्रपति भण्डारीसँग करिब दुई घन्टा भेटघाट र कुराकानी गर्ने अवसर पाएकी थिएँ । भेटघाटमा उहाँले आफ्ना लागि केही सुझाब भए दिनका लागि भन्नुभएको थियो । कसैले नमाग्दा त सुझाब दिन तम्सिने हाम्रा लागि राष्ट्रप्रमुखलाई नै सुझाव दिन पाउनु राम्रो अवसर थियो । शुरुमै मैले भीभीआईपीको सवारीले सडकमा धेरै दुःख भयो, एयरपोर्टसम्म आउन–जान हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि भनेकी थिएँ । जवाफमा उहाँले यो कुरा आफूले राम्ररी बुझेको बताउँदै यसका लागि नजिकै हेलिप्याड बनाउने कुरा पहिल्यै चलेको रहेछ । म बाहिर निस्कँदा जाममा अरूलाई दुःख नहोस् भनिरहेको हुन्छु । यही विषयलाई लिएर ट्राफिक कार्यालयसँग संयोजनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयको मिटिङ पनि गराएँ । हेलिकोप्टरमा हिँड्नलाई हेलिप्याड सबैतिर हुँदैन, यो विषयमा सरकारले नै सोच्नुपर्छ भन्नु भएको थियो ।
राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारीलाई गरिएको अपमानको क्षतिपूर्ति के हो ? पदमा पुगेका मानिसलाई चाहिँ जे–जस्ता शब्द प्रयोग गरे पनि हुन्छ ?
गाडी प्रसङ्गलाई लिएर राष्ट्रपतिको त्यति धेरै आलोचना र मान–मर्दन हुँदा राष्ट्रपति कार्यालयको मौनतालाई लिएर मानिसहरूले प्रश्न उठाएका छन् । जोसुकै भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपति मात्रै हुँदैनन्, तिनका विभिन्न सल्लाहकारहरू हुन्छन् । मिडियाको अनुगमन गर्ने मान्छेहरू पनि होलान्, साथमा मिडिया सल्लाहकार भन्ने पद नै छ । तिनीहरू के हेरेर बसे ? भन्ने प्रश्नले पनि त्यत्तिकै ठाउँ लिएको छ । राष्ट्रपतिलाई के–कस्तो सुविधा दिने–नदिने निर्णय सरकारले गर्ने हुँदा स्पष्टीकरण पनि सरकारकै तर्फबाट आउनुपथ्र्यो, तर राष्ट्रपति कार्यालयले के भएको हो भन्ने स्पष्ट पार्नै नहुने भन्नेचाहिँ होइन । यो घटनामा राष्ट्रपति कार्यालय बोल्नुपथ्र्यो । रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा विभिन्न घटना सन्दर्भमा उहाँका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले कुरा के भएको हो भनेर स्पष्ट पार्ने गर्नुभएको मानिसले बिर्सिएका छैनन् । जहाँसम्म राष्ट्रपतिको कुरा छ, संविधानले उहाँलाई बोल्ने अधिकार दिएको छैन ।
भीभीआईपीको सवारीका बेला एकपल्ट राष्ट्रपतिको गाडी बिग्रिएपछि नेपाली सेनाले सरकारसँग गाडीको माग गरेको रहेछ । राष्ट्रपति नेपाली सेनाका परमाधिपति भएकाले गाडीलगायत सुरक्षाको सम्पूर्ण प्रबन्ध नेपाली सेनाले नै तय गर्छ । हिजो राजसंस्था हुँदा राजा सेनाका परामाधिपति हुँदा पनि सेनाले नै सबै प्रबन्ध गर्ने गथ्र्यो । सेनाले राष्ट्रपतिको गाडीका लागि मागेको १८ करोड एउटा गाडीका लागि नभएर सुरक्षावाला सबै गाडीका लागि हो भन्ने कुराको जानकारी सुरुमै दिइएको भए राष्ट्रपतिले त्यति धेरै अपमान खप्नुपर्ने थिएन । उहाँलाई के भनियो, के भन्न बाँकी राखियो कुनै सीमा छैन । यो प्रसङ्गमा उहाँको कुनै भूमिका थिएन भन्ने कुरा अहिले बाहिर आइसकेको छ । बिनागल्ती यसबीचमा राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारीलाई गरिएको अपमानको क्षतिपूर्ति के हो ? पदमा पुगेका मानिसलाई चाहिँ जे–जस्ता शब्द प्रयोग गरे पनि हुन्छ ?
यसमा राष्ट्रपति कार्यालय र सरकार दोषरहित छैनन् । समयमा सही सूचना प्रवाह गरेर नागरिकलाई दिग्भ्रमित हुनबाट जोगाउने र राष्ट्रप्रमुखको मान, सम्मान र आत्मसम्मानमा चोट पुग्नबाट बचाउने दायित्व सरकारको हो ।
यो प्रसङ्गमा कतिले राष्ट्रपतिले मिडिया हेर्नुहुन्न कि के हो पनि भने । तर, उक्त भेटमा भएको कुराकानीको आधारमा मिडिया र सोसियल मिडियामा के चलिरहेको छ भन्नेबारे पनि उहाँ अनभिज्ञ भएजस्तो लागेन । निर्मला पन्तको विषयमा पटकपटक चासो राख्नुभएको थियो । पहिलापहिलाझैँ कसले लगेर के सुनाइदिन्छ त्यही मात्रै सुन्ने अवस्था अहिले छैन । कसैले उठाएको कुरालाई चारतिरबाट पुष्टिका आधारहरू खोज्न सकिन्छ । चाहे राष्ट्रप्रमुखले होस् या नागरिकले ।
यो प्रसङ्गमा अरू जे–जे भएको भए पनि छरपस्टै भएकोचाहिँ हाम्रो एटिच्युड हो । हामी कतिसम्म सोच्न र लेख्न सक्छौँ भन्ने कुरा यसबीचमा मिडिया र सोसियल मिडियामा आएका गाली–गलौजको अनुगमन गरे पुग्छ । खास भएकोचाहिँ के रहेछ भनी कसैले पनि बुझ्न चाहेको देखिएन । यसमा राष्ट्रपति कार्यालय र सरकार दोषरहित छैनन् । समयमा सही सूचना प्रवाह गरेर नागरिकलाई दिग्भ्रमित हुनबाट जोगाउने र राष्ट्रप्रमुखको मान, सम्मान र आत्मसम्मानमा चोट पुग्नबाट बचाउने दायित्व सरकारको हो ।